COVID-19 खोप लिनुहोस् - Covid-19 खोप लिनुहोस्
Nepali	 English Welsh Hindi Bengali Urdu Gujarati Punjabi Tamil Arabic French Spanish German Polish Estonian Ukrainian Hebrew Chinese
COVID-19 VACCINE CAMPAIGN लिनुहोस्
लिनुहोस् COVID-19 खोप अभियान एक गैर नाफामुखी समुदायमा आधारित अभियान हो मानिसहरूलाई भ्याक्सिन लिन प्रोत्साहित गर्न
योग्य यूके जनसंख्याको विशाल बहुमत COVID-19 बिरूद्ध inocised छ
(१) प्रत्येक COVID-१ vacc खोपको बारेमा जानकारी प्रदान गर्न युकेमा स्वीकृत।
(२) खोप सम्बन्धी सामान्य प्रश्नहरूको उत्तर प्रदान गर्न।
()) वार्तालापको लागि प्लेटफर्म र नेतृत्व भूमिका प्रदान गर्न
COVID-19 खोप हिचक।
()) अभियान र मानिसहरूलाई COVID-19 खोप लिन प्रोत्साहित गर्न।
खोप लिनुभयो? आफ्नो कथा साझा गर्नुहोस्
बेलायती इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो खोप कार्यक्रम।
खोपहरू परीक्षण गरिएको छ?
खोप कसरी यत्तिको चाँडो जारी गरियो?
तपाईंले किन ख्याल गर्नुपर्छ?
को मात्र फुत्कने बाटो COVID-19 महामारीको खोप मार्फत छ.
विज्ञहरूको अनुमान छ कि प्रसारणको श्रृंखलालाई तोड्नको लागि अधिक जनसंख्याको TP०१TP1T लाई खोप लगाउनु पर्छ महामारी रोक्न। जब जनसंख्याको पर्याप्त खोप लगाइन्छ, भाइरसलाई नयाँ व्यक्तिहरूलाई संक्रमित गर्न फेला पार्न गाह्रो हुन्छ, र महामारीको मृत्यु हुन थाल्छ।
खोप लगाउन आवश्यक पर्ने व्यक्तिको स vacc्ख्या महत्वपूर्ण टीकाकरण स्तरको रूपमा चिनिन्छ। एक पटक जनसंख्या त्यस संख्यामा पुगेपछि, तपाईले बथानलाई प्रतिरोध शक्ति पाउनुहुनेछ। हर्द रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता तब हुन्छ जब त्यहाँ धेरै खोपिएका व्यक्तिहरू हुन्छन् जसमा संक्रमित व्यक्तिले संक्रमित व्यक्तिलाई कतै भेट्टाउन सक्दैन र त्यसैले भाइरस अन्य व्यक्तिहरूमा पनि फैलिन सक्दैन। खोप लिन नसक्ने मानिसहरूलाई रक्षा गर्न यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
महामारीलाई रोक्न जनसंख्याको खोप लगाउनु पर्छ
In मा १
तिनीहरूले फाइजर खोप लिन असम्भव छ भने
भर्खरको YouGov सर्वेक्षणमा, यो फेला पर्‍यो कि बेलायतमा सर्वेक्षण गरिएको मध्ये in मध्ये एकले उनीहरूलाई फाइजर खोप लिने सम्भावना नभएको बताए। यो खोपलाई विश्वास नगर्ने वा सुरक्षित छ भन्ने विश्वास नगर्ने मानिसहरूका लागि सामान्य रूपमा खोपको बिरूद्धमा आएका कारणहरू फरक छन्। It 67१TP१ टी बाट पनि जसले यो लिने सम्भावना छ भने, 42२१ टीटी १ टीले उनीहरूले यो लिन सक्ने धेरै सम्भावना रहेको बताएका थिए, २1१टीपी १ टीले उनीहरूले 'पर्याप्त सम्भाव्यता' भएको भने।
भ्याक्सिन हिचकिचाहट हो जहाँ खोपहरू पहुँच भएका मानिसहरू खोप लगाउन वा इन्कार गर्छन्। कथित प्रमाणले बढ्दो स .्केत दिन्छ कि धेरै पृष्ठभूमिका मानिसहरू, विशेष गरी अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्ति, खोप लिन हिचकिचाउँछन् र कसैलाई प्रस्ताव राख्दा त्यसो गर्न अस्वीकार गर्दछन्।
अनुसन्धानले संकेत गर्दछ कि ती समूहहरू जुन उनीहरूको दैनिक जीवनमा बारम्बार भेदभाव देखा पर्दछ खोपहरू प्रति ठूलो हिचकिचाहट हुन्छ। उदाहरणका लागि, इ England्ल्याण्डमा कालो र अल्पसंख्यक जातीय अभिभावकहरू आफ्ना बच्चाहरू र आफैंका लागि COVID-19 खोपको लागि उनीहरूको सेतो समकक्षहरू भन्दा तीन गुणा बढी हिचकिचाउँदछन् (बेल एट अल।, २०२०)।
'अस्वीकृतहरू' द्वारा उपलब्ध गराईएका केही कारणहरू:
मलाई थाहा छैन यो पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ कि छैन - खोप एकदम चाँडो विकसित भएको छ, र / वा त्यहाँ साइड इफेक्ट पनि छन् जुन म चिन्तित छु।
मँ 'कुर्नुहोस् र हेर्न' चाहन्छु अरूसँग के हुन्छ जुन मैले लिनु अघि यो लिन्छ
अन्य सिद्धान्तहरू - खोप प्रयासको वास्तविक उद्देश्य जनसंख्या ट्र्याक र नियन्त्रण गर्नु हो, र / वा यो खोप केवल औषधी कम्पनीहरूको लागि पैसा कमाउनको लागि विकसित गरिएको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले भर्खरै खोपलाई यसको एउटाको रूपमा सूचीबद्ध गर्‍यो शीर्ष १० विश्वव्यापी स्वास्थ्यको लागि सबैभन्दा ठूलो खतराहरू.
युकेमा पुष्टि COVID-19 केसहरू
बेलायतमा COVID-19 बाट मृत्यु
COVID-१ an एक संक्रामक रोग हो जुन भर्खरै पत्ता लगाइएको कोरोनाभाइरसलाई सार्स-कोभ -२ (गम्भिर तीव्र श्वसन सिन्ड्रोम कोरोनाभाइरस २) को रूपमा चिनिन्छ। यो पहिलो डिसेम्बर २०१ 2019 मा बेलायतमा रिपोर्ट गरिएको थियो।
COVID-19 भाइरसले संक्रमित धेरै व्यक्तिहरूले हल्का देखि मध्यम श्वास रोगको अनुभव गर्नेछन् र विशेष उपचारको आवश्यकता बिना नै स्वास्थ्यलाभ हुन्छन्। पाको उमेरका व्यक्तिहरू, र हृदय रोग, मधुमेह, दीर्घकालीन श्वास रोग, र क्यान्सर जस्ता अन्तर्निहित चिकित्सा समस्याहरू भएका गम्भीर बिरामी हुने बढी सम्भावना हुन्छ।
प्रसारण रोक्न र ढिलो गर्न उत्तम तरिका भनेको COVID-19 भाइरस, यसको कारण हुने रोग र यसले कसरी फैलिन्छ भन्ने बारेमा राम्ररी जानकारी दिनु हो। आफ्नो हात धुँदा, अनुहारको मास्क लगाएर र अरूबाट कम्तिमा २ मीटर दूरी राखेर संक्रमणबाट आफूलाई र अरूलाई बचाउनुहोस्।
COVID-१ virus भाइरस मुख्यत: थोप्लोको थोप्ला वा नाकबाट डिस्चार्जको माध्यमबाट सर्छ जब संक्रमित व्यक्ति खोकी वा छींक लाग्छ, त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले श्वासप्रश्वासको शिष्टाचार पनि अभ्यास गर्नु पर्छ (उदाहरणका लागि, फ्लेक्ड कुहिनो खोकीमा)।
आजसम्म, निम्न खोपहरू छन् स्वीकृत बेलायतको औषधि नियामक द्वारा सुरक्षितको रूपमा, चिकित्सा र स्वास्थ्य सेवाहरू नियामक एजेन्सी (MHRA):
अक्सफोर्ड / एस्ट्राजेनेका
१०० मिलियन डोज
अधिक जानकारी हेर्नुहोस्
Million० करोड खुराक
१ million मिलियन डोज
Year १ वर्ष पुरानो
NHS तत्काल केयर जीपी
NHS ले ठूलो हदसम्म खोप केन्द्रहरू पनि खोलेको छ जुन हप्ताको हजारौं जीवन बचाउने ज्याबहरू प्रदान गर्न सक्षम छ, जुन देशभरि बिन्दुहरू छन्। एक केन्द्रबाट-45 मिनेट ड्राइभमा बाँच्नेहरूलाई पत्र पठाइन्छ, उनीहरूलाई अपोइन्टमेन्ट बुक गर्न आमन्त्रित गर्दै।
देशका फार्मेसी-नेतृत्व पायलट साइटहरूको साथ खोलेको सयौं थप जीपी-नेतृत्व र अस्पताल सेवाहरू प्रक्रियामा छन्।
को केन्द्रहरु व्यक्तिहरू अनलाइन वा फोन मार्फत राष्ट्रिय बुकिंग सेवा मार्फत केन्द्रहरूमा अपोइन्टमेन्ट बुक गर्नका लागि अतिरिक्त विकल्प हुन्। यदि यो तपाइँको लागि उपयुक्त छैन भने, तपाइँ यसको सट्टामा तपाइँको एक स्थानीय खोप केन्द्रहरूमा लगाउन सक्नुहुन्छ।
के COVID-19 खोपहरूले अपरिवर्तनीय साइड इफेक्ट निम्त्याउन सक्छ?
के COVID-19 ले अपरिवर्तनीय साइड इफेक्ट पैदा गर्न सक्छ?
कुनै पनि बिरामी अहिलेसम्म अपरिवर्तनीय साइड इफेक्टबाट ग्रस्त छैन - क्लिनिकल परीक्षण वा जनसंख्यामा। यो गलतफहमी एक प्रस्तुति गलत पढेर फैलिएको थियो जसले वास्तवमा भनेको थियो कि vacc,००० खोपिएका अस्थायी र उल्टो साइड इफेक्टका साथ ग्रस्त थिए।
सबै औषधिहरूको साइड इफेक्ट पैदा गर्ने सम्भावना हुन्छ - प्यारासिटामोल पनि। यो रोगले हुने नोक्सान बिरुद्द तौलनु पर्छ।
के खोपहरूले गर्भपतन भ्रुण कोषहरू समावेश गर्दछ?
बेलायतले अनुमोदित खोपले भ्रुण कक्षहरू समावेश गर्दैन। केहि खोपहरूले धेरै दशक पहिले यस भाइरसलाई बढ्नको लागि विशेष विशेष भ्रुण कोषहरू प्रयोग गर्‍यो। त्यस समयमा मौलिक कक्षहरू मात्र विकल्पहरू थिए। यी कक्षहरू वर्तमान खोपहरूमा उपस्थित छैनन्।
के खोपहरू जनसंख्या चिप गर्न र ट्र्याक गर्न प्रयोग भइरहेको छ?
खोपले निगरानीको लागि कुनै चिप्स वा ट्र्याकरहरू समावेश गर्दैन। एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने देशहरूबाट विश्वभरि स्वतन्त्र अधिकारीहरूले खोपहरूलाई अनुमोदन गरेका छन् र कुनै माइक्रोचिपहरू फेला परेनन्।
वास्तविकता यो हो कि त्यहाँ जनसंख्या ट्र्याक गर्न धेरै सजिलो तरिकाहरू छन् - मोबाइल फोन, बैंक कार्ड आदि, जैविक ट्र्याकर भन्दा।
किन गर्भवती महिला र बच्चाहरूलाई क्लिनिकल परीक्षणहरूमा सामेल गरिएको थिएन?
गर्भवती महिला र बच्चाहरू प्राय: प्रारम्भिक परीक्षणहरूमा समावेश हुँदैनन्। हालको COVID-19 खोपहरू यस चरणमा अधिकांश बच्चाहरूको लागि सिफारिस गरिदैन। गर्भवती महिलाहरूको लागि निर्देशन व्यक्तिगत जोखिममा आधारित निर्णय गर्नु हो। यसको मतलब यो होइन कि यी समूहहरूमा यो असुरक्षित छ।
यो चिंतनशील हो र सुरक्षा सावधानी अपनाएको एउटा चिन्ह।
खोपहरूले तपाईंको डीएनए परिमार्जन गर्दछ?
बेलायतले अनुमोदित खोपहरूले तपाईंको DNA परिवर्तन गर्न सक्दैन।
फाइजर / बायोटेक र मोडर्ना भ्याक्सिनहरूले एमआरएनए प्रयोग गर्छ हाम्रो कोशिकालाई कोरोनाभाइरसको हलोमार्क स्पाइक प्रोटीनको एक टुक्रा बनाउन को लागी एक प्रतिरक्षा प्रणाली प्रतिक्रिया स्पार्क गर्न। एक पटक एमआरएनएले त्यसो गरेपछि हाम्रो कोषहरूले यसलाई भत्काउँछ र यसबाट छुटकारा पाउँछ।
एकचोटी खोप पाए पछि के मैले अझै अनुहारको मास्क लगाउने वा सामाजिक दूरीको अभ्यास गर्ने?
एक पटक म खोप लगाए पछि, के म अझै मास्क लगाउन वा सामाजिक दूरीमा अभ्यास गर्न आवश्यक छ?
यदि तपाई खोप प्राप्त गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईले अरूलाई मास्क लगाउन जारी राख्नुपर्दछ, आफ्नो हात धुनुहोस् र सामाजिक दूरीको अभ्यास गर्नुहोस्। यसका लागि दुई कारणहरू छन्।
सबै अनुमोदित भ्याक्सिनहरूलाई उत्तम सम्भावित प्रतिरक्षा प्राप्त गर्न हप्ताहरू अन्तर्गत खुराकहरू आवश्यक पर्दछ। जब तपाइँ तपाइँको पहिलो खुराक प्राप्त गर्नुहुन्छ, तपाइँ तुरून्त प्रतिरक्षा हुनुहुनेछैन। यसले कम्तिमा एक हप्ता देखि १० दिन लिन सक्दछ तपाईको शरीरलाई एन्टिबडीहरू विकास गर्न सुरू गर्न, र त्यसपछि ती एन्टिबडीहरू आगामी केही हप्ताहरूमा बढ्न जारी राख्दछन्।
यी खोपहरू COVID-19 बाट गम्भीर बिमारी र मृत्यु रोक्नको लागि तिनीहरूको क्षमताको लागि विकसित र परीक्षण गरिएको थियो। यो स्पष्ट छैन कि यसले एसिम्प्टोमेटिक संक्रमण र फैलाउन पनि बचाउँदछ। यस प्रश्नको मूल्या to्कन गर्न निरन्तर अध्ययनहरू हुनेछन्, तर केहि समय आउनेछ जुन हामीलाई वास्तवमै थाहा छ। त्यसोभए, तपाईंले खोप प्राप्त गरेपछि, तपाईंले अझै पनि खोप लिइएको नभएको अन्य व्यक्तिहरूको सुरक्षाको लागि कदमहरू चाल्नु पर्छ।
COVID-19 को बाँच्ने दर यति धेरै छ, मलाई किन खोप चाहिन्छ?
COVID-19 को बाँच्ने दर यति धेरै छ कि किन मलाई खोप लिन आवश्यक छ?
यो सत्य हो कि COVID-19 प्राप्त गर्ने प्रायः व्यक्तिहरू पुनः प्राप्त गर्न सक्षम छन्। तर यो सत्य पनि हो कि केही व्यक्तिहरूले गम्भीर जटिलताहरू विकास गर्छन्। हालसम्म, कोभिड १ from बाट संसारभरि करिब २ लाख मानिस मरेका छन् - र त्यसले बाँचेकाहरूका लागि खाता बनाउँदैन तर अस्पतालमा भर्ना हुनु आवश्यक छ। किनकि यस रोगले फोक्सो, मुटु र मस्तिष्कलाई हानि पुर्‍याउन सक्छ, यसले लामो अवधिको स्वास्थ्य समस्या पनि निम्त्याउन सक्छ जुन विशेषज्ञहरु अझै बुझ्नको लागि काम गरिरहेका छन् - यसलाई "लामो" COVID भनिन्छ।
खोप लगाउनाले तपाईंको वरपरका मानिसहरूलाई पनि सुरक्षा दिन्छ। यदि COVID-19 ले तपाईंलाई धेरै बिरामी बनाउँदैन भने, तपाईं यसलाई अरू कसैलाई दिन सक्नुहुन्छ जो अधिक गम्भीर रूपमा प्रभावित हुन सक्छ। व्यापक टीकाकरणले जनसंख्याको रक्षा गर्दछ, जो जोखिममा बढी जोसुकाहरू र खोप लगाउन नसक्नेहरू सहित। यो महामारीको अन्त्य गर्न र लकडाउनहरू हटाउन महत्वपूर्ण हुनेछ।
English	 Welsh	 Hindi	 Bengali	 Urdu	 Gujarati	 Punjabi	 Tamil	 Arabic	 French	 Spanish	 German	 Polish	 Estonian	 Ukrainian	 Hebrew	 Chinese	 Nepali